Wood Laser Machines, Tube Laser Cutting Machine - Han kaThixo Yueming
Laser Han kaThixo Group Ilungu
Oluzenzekelayo Sole Iglu sisitshizi
Advertising & Izipho
Yezihlangu & Bag
ezisetyenziselwa ikakhulu ibe ziinkuni, iphepha, ngethwathwa, acrylic, iplastiki, irabha, bamboo kunye nezinye izinto non-metal.
ngobuciko High, impendulo ekhawulezayo, intsebenziswano ezinzileyo, ubume ikhuselekile na kwaye ithembekile, kunye iintsilelo ezimbalwa kunye nokusebenza eliphezulu.
izinto Metal scuh njengokuba insimbi, carbon sentsimbi, aluminium ingxubevange, titanium ingxubevange, nobhedu, copper ebomvu njl
Esitalini amandla laser, isantya ukumakisha phezulu, japan elungileyo ukumakisha, efficieny, efanelekileyo imveliso mass.
Ikakhulu ezifanelekileyo processing ngamnye entle ezifana amakhadi oshishino, izipho, amakhadi emibuliso, njl
Esebenzayo kwimathiriyeli: insimbi, carbon sentsimbi, iphepha kwalenza, nobhedu, aluminium ingxubevange ipleyiti kunye nezinye zesinyithi
umncedisi we Shenzhen Han ka-Laser Technology Co., Ltd
(Ikhowudi stock: 002008), i ishishini hi-zobugcisa leyo silwenza oomatshini laser kwaye lijolise Uphando & noPhuhliso kunye ukuthengisa iimveliso laser mveliso. Elise Songshan Lake Hi-zobugcisa Industrial Development Zone, engqongwe ngamashishini hi-teknoloji Top 500, Han kaThixo Yueming Laser livelise ngokuthe chu kunye neenzuzo yi ezithathwe IT kunye Hi-tech lwezibonelelo zabasebenzi e Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, kwakunye phambili Dongguan kweli yokuvelisa,
iinkokeli zoshishino Daliang Shunde weza kutyelela inkampani yethu
Ngaba sinikeza abathengi kunye uvavanyo eziphathekayo for free?
Sinako ukunika abathengi kunye uvavanyo mahala zabo ezibonakalayo okanye imveliso. injineli wethu uza kuvavanya isiphumo kakhulu ukusika, nokukrola okanye ukumakisha. I parameters zovavanyo, imifanekiso eneenkcukacha, ingxelo uvavanyo kunye nevidiyo mazithunyelwe reference yoMthengi.
iinkokeli zoshishino Daliang Shunde weza kutyelela, ukuphanda babelane kunye nathi ikomkhulu lethu Dongguan. USekela-General Manager kaHananiya kaThixo Yueming Laser Group Zhuofei ngokufudumeleyo wamkela iindwendwe yaye olunzulu incoko.
Umatshini uphawu laser ukusika LED --- Ihlebo evenkileni odumileyo
Kutheni Khetha Han kaThixo Yueming Laser Group
R EZINAMANDLA & D AMANDLA
izihloko 156 patents 80 ezinkulu imveliso Ngqamanisa ubuchwepheshe advanced ngamazwe
INKQUBO YOLAWULO LOMGANGATHO engqongqo
ulawulo lomgangatho kulo lonke ukuvelisa processing ngokupheleleyo yolawulo iinkcukacha Scientific
izixhobo Ithunyelwe processing imveliso ngqo Yenzelwe izixhobo asebenzisekayo laser mveliso
200 kugesi inkonzo izithuthi nesevisi yabathengi lonke 100 inkonzo onenkathalo iiyure ezingama-24
Automatic Laser Welding Machine, Machine CO2 Laser Ukumakisha , Co2 Laser Cutting Machine Price, 100w CO2 Laser ngentlabo Cutting Machine , Laser Cutting Machine ., 50w Laser lokuMakisha Machine ,